Rattan Isiokwu Oriọna Manufacturers na Suppliers - China Rattan Isiokwu Oriọna Factory
Nyocha dị mkpa:Rattan Oriọna,Rattan Pendant Light,Rattan Ft Oriọna,Achara Ngwo,Achara Pendant Ìhè,Achara Isiokwu Oriọna
Nkịtị oriọna tabletan oriọnana-agbakwụnye ọkụ na ikuku ikuku na ebe obibi gị na opalhouse. A na-eji oriọna ejiri aka ya kpuchie ya na ihe ndi ozo di nkpa, dika ihe ndi ozo, nke di mfe ma di nma, na-eme ka iru ala di nma na tebụl akwa ma ọ bụ tebụl kọfị.
Kpara oriọna tabletan oriọnasi mba style ka nke eke rattwined ekwesị na horizontally. Styledị dị mfe, java na nke oge a, na-enwe mmetụta dị ọkụ. O nweghi ike inye aka ma cheta ndụ izu ike na izu ike dị na mba ahụ. Ndị China, Japan, Canada, Australia na ebe ndị ọzọ hụrụ ya n'anya.
Na oriọna tabletan oriọnaọ bụghị naanị na-enwu gbaa ụlọ ahụ, kamakwa enwere ike iji ya chọọ mma n'ime ime ụlọ ahụ. Nha, ihe na ọdịdị nke oriọna na-ekpebi ego ọkụ. Dabere na ụdị ịchọ mma gị, ị nwere ike ịchọta ụdị aghụghọ dị iche iche site na ọgbara ọhụrụ ruo ụdị nke bohemian na webụsaịtị anyị, ma ọ bụ jiri oriọna tebụl rattan mee ka ị nwee ike mebe ikuku. Agba site na ọchịchịrị aja aja na oji na nke ọcha; ụdị ndị ahụ sitere na gburugburu ruo na square, site na elu ruo obere.
Nke anyi Xinsanxing bụ soplaya a kpara oriọna oriọna oriọna. Anyị na-enye ọrụ ahaziri iche na nha, ọdịdị, ụcha na ọla kọpa iji zute gịahazirimkpa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi aha mmadụ ịkarị aha, biko kpọtụrụ anyị n’oge.
Rattan oriọna, oriọna na-acha uhie uhie, XINSANXING